WhatsApp chats တွေကို iPhone ကနေ Android ကိုဘယ်လိုပြောင်းမလဲ အိုင်ဖုန်းသတင်း
Ignacio Sala | | အန်းဒရွိုက်, သင်ခန်းစာများနှင့်လက်စွဲစာအုပ်
iOS ရော Android ရောနှစ် ဦး စလုံးသည် platform တစ်ခုတည်းရှိနေသမျှကာလပတ်လုံးအချက်အလက်ဆုံးရှုံးခြင်းကိုရှောင်ရှားရန်ကျွန်ုပ်တို့အားရွေးချယ်စရာများစွာပေးထားသည်။ iCloud သို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့၏ဂူဂဲလ်အကောင့်မှကူးယူမှုများသည် Android တစ်ခုမှတစ်ခုသို့ iPhone iPhone တစ်ခုမှတစ်ခုသို့ကူးပြောင်းခြင်းသည်ကလေးကစားခြင်းဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ယခင်စမတ်ဖုန်းကဲ့သို့အသစ်သောအရာများနှင့်ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နိုင်သည့်အရာအားလုံးကိုကျွန်ုပ်တို့မဆုံးရှုံးပါစေနှင့်။ ဘာမှမဖြစ်ပျက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်။ ဒါပေမယ့် ¿iPhone ကနေ Android ကိုသွားချင်ရင်ဘာဖြစ်မလဲ သို့မဟုတ် Android မှ iPhone သို့လား။
ဤကိစ္စတွင်အခြေအနေများအကြီးအကျယ်ပြောင်းလဲသွားသည်။ သက်ဆိုင်ရာ application တွင်အချက်အလက်များကိုသိမ်းဆည်းရန်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ဆာဗာများရှိနိုင်ပြီး Telegram ကဲ့သို့ပင် Android နှင့် iOS နှစ်မျိုးလုံးနှင့်သဟဇာတဖြစ်သည်။ ထို့နောက်ပြောင်းလဲမှုသည်သိသိသာသာမဖြစ်နိုင်ပေ။ WhatsApp ကဲ့သို့ပင်၊ iOS မှ Android သို့အပြန်အလှန်သွားသောအခါကျွန်ုပ်တို့၏ chats နှင့်ဓာတ်ပုံများအားလုံးကိုမဆုံးရှုံးရန်ခက်ခဲလိမ့်မည်။ သို့သော်၎င်းကိုအောင်မြင်ရန်နည်းလမ်းများရှိပါသည်။ ဤနေရာတွင်ကျွန်ုပ်တို့ကိုအရှင်းဆုံးနှင့်ရိုးရိုးလေးပြောပြပါမည်.
WhatsApp chats များကို iPhone မှ Android သို့လွှဲပြောင်းခြင်း (သို့) အပြန်အလှန်အားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုသော application ပေါ် မူတည်၍ ရှုပ်ထွေးမှုနည်းနိုင်သည်။ Tenorshare မှယောက်ျားများသည် iCareFone application ကိုအသုံးပြုခွင့်ပေးပြီး၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုခွင့်ပြုသည် WhatsApp အချက်အလက်များကိုမိုဘိုင်းပလက်ဖောင်းတစ်ခုမှတစ်ခုသို့လွှဲပြောင်းသည်iTunes အပြင်သီချင်းများ၊ စာအုပ်များနှင့်ရုပ်ပုံများကိုကူးယူခြင်း၊ အပလီကေးရှင်းများဖျက်သိမ်းခြင်း၊ iTunes ကိုမည်သည့်အချိန်တွင်မဆိုအသုံးမပြုစေဘဲကျွန်ုပ်တို့၏ iPhone, iPad သို့မဟုတ် iPod touch မှရုပ်ပုံများကိုကျွန်ုပ်တို့၏ကွန်ပျူတာသို့လွှဲပြောင်းခြင်း၊
WhatsApp ကိုသင့် iPhone မှသို့မဟုတ် Android ဖုန်းသို့ iCareFone ဖြင့်လွှဲပြောင်းခြင်းသည်အလွန်ရိုးရှင်းပြီးလျင်မြန်သောလုပ်ငန်းစဉ် (နောက်ဆက်တွဲအဆင့်များ) ဖြစ်သောကြောင့်နောက်ဆုံးကာလသည်ကျွန်ုပ်သိမ်းဆည်းထားသည့်ပုံနှင့်ဗီဒီယိုပမာဏပေါ်မူတည်သည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့စက်ပစ္စည်း၏ကျွန်ုပ်တို့၏ WhatsApp ကိုအကောင့်။ ဖြစ်စဉ် ၎င်းသည် operating system နှစ်ခုလုံးအတွက်တူညီသည်။
လျှောက်လွှာကို run ပြီးတာနဲ့ iCareFone, ကြှနျုပျတို့ ... လုပျရမညျ ကိရိယာများ၊ အရင်းအမြစ်နှင့် ဦး တည်ရာကိုကျွန်ုပ်တို့၏ကွန်ပျူတာနှင့်ချိတ်ဆက်ပါ လျှောက်လွှာကိုအသုံးပြုပြီးအချက်အလက်များ၏ရင်းမြစ်ဖြစ်သော (မည်သည့် terminal မှ data များကိုကျွန်ုပ်တို့ထုတ်ယူလိုသည်) နှင့် destination terminal (မည်သည့် terminal သို့ကူးယူလိုသည်) ကိုရွေးချယ်ပါ။ တည်ထောင်ပြီးသည်နှင့် Transfer ကိုနှိပ်ပါ (ကျွန်ုပ်တို့၏ကိစ္စတွင်၊ ကျွန်ုပ်သည် iPhone 6s မှ Samsung Galaxy သို့ WhatsApp chats ကိုလွှဲပြောင်းမည်။ )
Transfer ခလုတ်ကိုနှိပ်လိုက်ပါကလျှောက်လွှာကိုဂရုစိုက်ပါလိမ့်မည် အချက်အလက်အားလုံးကိုမိတ္တူကူးပါပူးတွဲပါဖိုင်များအားလုံးပါ ၀ င်ပြီး၎င်းသည်ပစ်မှတ်ထားသည့်စက်ပစ္စည်းအားပြန်လည်တင်ပို့ခြင်း၊
ငါအရင်စာပိုဒ်များတွင်မှတ်ချက်ပြုခဲ့သည့်အတိုင်းငါတို့ WhatsApp ၏မိတ္တူ၌ရှိသတင်းအချက်အလက်ပေါ်မူတည်။ လုပ်ငန်းစဉ်အချိန်သို့မဟုတ်ထိုထက်နည်းအချိန်ယူနိုင်ပါသည်။ လုပ်ငန်းစဉ်အားလုံးစဉ်အတွင်း ကွန်ပျူတာနှင့်ချိတ်ဆက်ထားသည့်မည်သည့်ဆိပ်ကမ်းကိုမဆိုကျွန်ုပ်တို့မဆက်သွယ်ရပါ ကျွန်ုပ်တို့သည်လုပ်ငန်းစဉ်ကိုမှန်ကန်စွာမလုပ်ဆောင်စေလိုလျှင်၎င်းသည်လုပ်ငန်းစဉ်၏အစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည်။
iCareFone နှစ်ခုလုံးအတွက်ရနိုင်သည် MacOS အတွက် Windows ။
ဤရှုပ်ထွေးသောအလုပ်ကိုလုပ်ဆောင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့သည်အလွန်ရှုပ်ထွေးပြီးအလုပ်မလုပ်သောအင်တာနက်ပေါ်တွင်အလွန်ကွဲပြားခြားနားသောနည်းလမ်းများကိုတွေ့ရှိနိုင်သည်။ ကြိုးစားခဲ့သည့်ရွေးစရာများထဲမှကျွန်ုပ်ကိုအကောင်းဆုံးရလဒ်ပေးသည့်တစ်ခုမှာ Windows နှင့် Mac application « dr ။ fone »နှင့် Tenorshare iCareFone သင်မှကူးယူနိုင်သည် ဒီ link ကို ပြီးတော့မင်းကကြိုးစားကြည့်လို့ရတယ် ၎င်းသည် application တစ်ခုဖြစ်ပြီးသင်၏စာများကို iOS မှ Android သို့လွှဲပြောင်းခြင်းထက်မကလုပ်ဆောင်သည်။ သို့သော်ဤဆောင်းပါးတွင်ကျွန်ုပ်တို့ကိုစိတ်ဝင်စားသောအချက်မှာဤအချက်ကိုကျွန်ုပ်တို့အာရုံစိုက်လိမ့်မည်။
ဤအရာသည်သင်၏ Android မိုဘိုင်းဖြင့်သင့်အားစောင့်ကြည့်ပုံဖြစ်သည်
Application ကိုကျွန်ုပ်တို့၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်ဒေါင်းလုပ်လုပ်ပြီးသည်နှင့်၎င်းကို execute လုပ်ပြီးသူတို့၏သက်ဆိုင်ရာ USB ကြိုးများမှတစ်ဆင့် Mac သို့မဟုတ် PC နှင့်ချိတ်ဆက်ပါမည်။ ခွင့်ပြုချက်လိုအပ်သောစာများကိုကျွန်ုပ်တို့လက်ခံရမည်ဖြစ်သည်။ အထူးသဖြင့်လိုအပ်သော software ထည့်သွင်းမည့် Android ကိရိယာတွင်။ အရာအားလုံးလုပ်သင့်လုပ်ထိုက်တာပဲ။ အရာရာတိုင်းအဆင်သင့်ဖြစ်ပြီဆိုပါကကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့်စိတ်ဝင်စားသောအပိုင်းဖြစ်သော "အရန်ကူးခြင်းနှင့်ပြန်လည်ထူထောင်ခြင်း" ထဲသို့ဝင်ရောက်ပါလိမ့်မည်။
လာမယ့်ပြတင်းပေါက်မှာငါတို့ရွေးပါ ဘယ်ဘက် bar တွင် "WhatsApp ကိုအရံသိမ်း။ ပြန်ယူခြင်း" ရွေးစရာ, နှင့် Messaging application နှင့်သက်ဆိုင်သောကျွန်ုပ်တို့လုပ်ဆောင်နိုင်သောအမျိုးမျိုးသောရွေးချယ်မှုများပေါ်လာလိမ့်မည်။ ဤကိစ္စတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်“ WhatsApp မက်ဆေ့ခ်ျများလွှဲပြောင်းခြင်း” ပထမတစ်ခုကိုရွေးချယ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ကိရိယာနှစ်ခုပေါ်လာလိမ့်မည်၊ လက်ဝဲဘက်ရှိဒေတာအရင်းအမြစ်နှင့်ညာဘက်ရှိလက်ခံသူ။ ဤအချက်အလက်များသည်အရေးကြီးသည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းတို့သည်မှန်ကန်သောနေရာတွင်ထားရှိရန်သေချာစေရမည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်လက်ယာဘက်ရှိစက်ပစ္စည်းသည်ဒေတာများကိုလက်ခံရရှိမည့်သူသည်အသစ်တစ်ခုကိုပြန်လည်ရယူရန်အတွက်လိုအပ်သော WhatsApp သတင်းအချက်အလက်အားလုံးဆုံးရှုံးသွားမည်ဖြစ်သည်။ အမှာစာမမှန်ပါကအလယ်ပိုင်းခလုတ်ကို« Flip »ကိုနှိပ်ပါ။။ မူရင်းစက်၏ဘယ်ဘက်တွင်ရှိကြောင်းနှင့် ဦး တည်ရာသည်ညာဘက်တွင်ရှိကြောင်းကျွန်ုပ်တို့အတည်ပြုပြီးပါက“ လွှဲပြောင်းခြင်း” ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။
၎င်းသည်မိနစ်အနည်းငယ်ကြာသောလုပ်ထုံးလုပ်နည်းတစ်ခုဖြစ်သည်၊ ထို့ကြောင့်စိတ်ရှည်ပါ၊ သင်လျှောက်လွှာကိုပိတ်ထားသည်ဟုသင်ထင်လျှင်တောင်မှ၎င်းကိုပြီးဆုံးရန်စောင့်ဆိုင်းပါ။ လွှဲပြောင်းမှုပြီးဆုံးသည်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ destination device သို့သွားပြီးဖော်ပြထားသောအဆင့်များကိုလိုက်နာရမည်။ WhatsApp ကိုကျွန်ုပ်တို့ install လုပ်ပြီးသကဲ့သို့ကျွန်ုပ်တို့ကိုပြလိမ့်မည်၊ ၎င်းတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖုန်းနံပါတ်ကိုပင်ပြုပြင်ရန်လိုအပ်သည်။ ထိုအချိန်တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏အတွင်းပိုင်းမှတ်ဉာဏ်တွင်သိမ်းဆည်းထားသောဒေတာများကိုပြန်ယူရန်လိုအပ်သည်, WhatsApp ကိုယ်တိုင်ကကျွန်ုပ်တို့အားပြောပြလိမ့်မည်ဖြစ်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ iPhone မှကျွန်ုပ်တို့လွှဲပြောင်းထားသောဒေတာအားလုံးကို Android အသစ်သို့လွှဲပြောင်းပေးမည်ဖြစ်သည်။
၎င်းသည်အဓိကအချက်နှစ်ချက်ပါသည့်ရိုးရှင်းသောလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်သတင်းအချက်အလက်များကိုမဆုံးရှုံးရန်သတိပြုရမည်။ သို့သော်ဤညွှန်ကြားချက်များဖြင့်သင်ရရှိရန်နည်းနည်းလေးသောပြproblemနာမရှိပါ။ ANDနောက်ဆုံးရလဒ်မှာသင်၏ terminal အသစ်ရှိသင်၏ WhatsApp စာများအားလုံးကိုရရှိလိမ့်မည်သတိပြုသင့်သည်မှာ၎င်းသည်ပြီးပြည့်စုံခြင်းမရှိကြောင်း၊ chats သည်ရှုပ်ထွေးပြီးသင်သိမ်းဆည်းထားသည့် chats များအကြားကြား၌ပေါ်လာမည်ဖြစ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ သို့သော်သင်၏ WhatsApp ကိုပြန်လည်ဖွဲ့စည်းရန်မိနစ်အနည်းငယ်အကြာတွင်ဖြေရှင်းနိုင်ပြီးအရေးကြီးသည့်အရာမှာမက်ဆေ့ခ်ျများ၊ ဓာတ်ပုံများနှင့်ဗွီဒီယိုများသည်ထိ မိ၍ မရပါ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - အိုင်ဖုန်းသတင်း » ယှဉ်ပြိုင်မှု » အန်းဒရွိုက် » WhatsApp chats ကို iPhone မှ Android သို့ဘယ်လိုပြောင်းလဲ
တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင် download link များအလုပ်မလုပ်ပါ ဖြေရှင်းနည်းရှိသလား။ WhatsApp ကို iOS ကနေ Android သို့ ၁ လကြာလွှဲပြောင်းရန်ခေါင်းကိုက်ခြင်းနှင့်အတူဖြစ်ခဲ့ရသည်။
ပေးဆောင်ထားသောဗားရှင်းလိုအပ်သောကြောင့်၎င်းသည်အလုပ်မလုပ်ပါ။ မဟုတ်ပါက WhatsApp ကိုဖြတ်သန်းရန် option ကို enable လုပ်ထားခြင်းမရှိပါ။ ၎င်းကိုပြုလုပ်ရန်အခြားနည်းလမ်းရှိပါသလား။
Jair Aicardo Usme Soto ဟုသူကပြောသည်
၎င်းသည်အလုပ်မလုပ်ပါ၊ သင်၎င်းကိုလွှဲပြောင်းခြင်းမလုပ်မချင်းအရာအားလုံးအဆင်ပြေပါသည်။ ထိုနေရာတွင်သင်ဝယ်ယူရန်တောင်းဆိုသည်၊ ဖြေရှင်းနည်းရှိသလား။
Jair Aicardo Usme Soto သို့ပြန်သွားပါ
ပိုဆိုးတာကသင်ပြပွဲကိုဝယ်သည် အရေးမကြီးပါ၊ စကားပြန်များကိုပြန်လည်ရရှိရန်အရေးကြီးသည်။
ပြီးတော့ whatsapp ကိုပြန်လည်တပ်ဆင်ပြီးတဲ့အခါ ... အဲဒါကိုသင်လုပ်မယ်လို့ထင်ရပေမယ့် ... မဟုတ်ဘူး။
သင်၏ဖုန်းနံပါတ်ကိုအတည်ပြုပြီးမိတ္တူတစ်စောင်ပြန်လည်ရယူရန်သင့်အားပြောလိမ့်မည်။ သို့သော် Drive မိတ္တူတစ်ခုပြန်ရယူရန်ခုန်လျှင် ...
ပြီးတော့သုံးခုတပ်ပြီးတဲ့နောက် WhatsApp ကသင့်ကိုနာရီအနည်းငယ်ပိတ်ထားပြီးနံပါတ်ကိုအတည်ပြုခွင့်မပြုပါဘူး။
တဖန်သင်တို့တွင်မိတ္တူတစ်ခုသို့မဟုတ် WhatsApp မရှိတော့ပါ။
နောက်ဆုံး ... ငါးကြိုးစားပြီးမှအလုပ်မလုပ်ပါဘူး အဆုံး၌ ... အရှက်ကွဲခြင်း restore မှမပေါ်လာပါဘူး။
အဆိုပါ Scammer မှတုန့်ပြန်
အိန်ဂျယ် VD ဟုသူကပြောသည်
ဒီပရိုဂရမ်က Android ကနေ iOS ကိုပြောင်းလို့မရဘူး၊ iOS ကနေ Android ပဲသွားတယ်။ tb ခေါင်းစဉ်ကလိမ်တယ်။
Angel VD သို့ပြန်သွားပါ
ဒါကအလုပ်မလုပ်ဘူး၊ အခမဲ့ဗားရှင်းကိုဆက်လက်သုံးရန်မှတ်ပုံတင်ဖို့တောင်းတယ်၊ ဒါဟာလိမ်လည်မှုပါပဲ
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်! ငါအရင်မှတ်ချက်တွေကိုဖတ်တဲ့အခါငါကြောက်လန့်ပြီး၎င်းသည်လိမ်လည်မှုလို့ထင်ခဲ့တယ်၊ ဒါပေမယ့်အဲ့တာနဲ့မတူဘူး၊ ငါ့ရဲ့မက်ဆေ့ခ်ျတွေ၊ ဓာတ်ပုံတွေနဲ့ WhatsApp တွေအသံလွှင့်ရုံတွေလွန်သွားပြီးရှုပ်ထွေးသွားတယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါလိုအပ်တာကအောင်မြင်ခဲ့တယ်။
မင်းဘယ်လိုလုပ်ခဲ့လဲ ငွေပေးချေမှုအကောင့် parfavarts ဝေမျှပါ
R. Fdez ဟုသူကပြောသည်
အမှန်စင်စစ် "demo" သည် WhatsApp ကိုလွှဲပြောင်းရန်အလုပ်မလုပ်ပါ၊ ကျွန်ုပ်သည် ၁ ကြိမ်သာလုပ်လိုသောကြောင့်ဤအစီအစဉ်သည်စျေးကြီးပါသည်။
သူတို့ကရှင်းရှင်းလင်းလင်းရှိရမယ်၊ ဒါက "သရုပ်ပြ" ကိုမပေးဘဲအချိန်ကုန်တဲ့လစာတစ်ခုဖြစ်တယ်၊ ပိုကောင်းတဲ့ဗီဒီယိုနှင့်ကာလထား, ငါ့အချိန်မဖြုန်းတီးပါနဲ့။ Ahhh နဲ့သူကပြောတယ်အစီအစဉ်ကငါ့ကိုဖြတ်သန်းနေတယ်၊ ​​အဲဒါကိုပိတ်ဖို့ရွေးစရာမပေးဘူး၊ ငါထွက်ပေါက်ကိုအတင်းအကျပ်ပိတ်ခိုင်းတယ်။
R. Fdez အားပြန်ပြောပါ
ဆောင်းပါးကရှင်းရှင်းလင်းလင်း "မင်းစမ်းကြည့်လို့ရတယ်" လို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောထားပြီး ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ အခုငါမသိဘူး ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သင့်ကိုကြိုဆိုပါတယ်
Arturo Hierro ဟုသူကပြောသည်
Arturo Hierro အားပြန်ပြောပါ
အလုပ်မလုပ်ပါဘူး၊ ငါလည်းကြိုးစားမှုသုံးခုနဲ့ဘာမှမလုပ်ဘူး ဤအရာများသည်သင့်ကိုအလွန်စိတ်ရှုပ်စေသောကြောင့်သင်နောက်ဆုံးသင်ပေးဆပ်ရမည့်နိဂုံးချုပ်လာသည်။ ဒါပေမယ့်သင်ဟာဒေါက်တာဖုန်းမဟုတ်တဲ့အခြားအက်ပလီကေးရှင်းတစ်ခုကိုရွေးချယ်နေတာပဲ။
Asun နှင့်နောက်ဆုံးတွင်မည်သည့် application ဖြင့်သင်အောင်မြင်ခဲ့သနည်း။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ကျွန်ုပ်သည် iPhone X မှ WhatsApp chats များကို Samsung Galaxy Note 20 သို့ပြောင်းရွှေ့ရန်လိုအပ်သည်။ မည်သည့်ကုန်သွယ်ရေးတွင်သူတို့လုပ်သည်ကိုသိလိုပါသလား။
အက်ပဲလ်သည်အိုင်ပက်ဒ် ၃ ၏အခမဲ့အသုတ်ပြင်ဆင်မှုအစီအစဉ်ကိုစတင်ခဲ့သည်
Apple မှ၎င်း၏ ၀ န်ထမ်းအချို့သည်အိမ်မှအလုပ်လုပ်ရန်အကြံပေးသည်